Diidmada is-casilaadda Farmaajo oo sii kordhaysa iyo ciidanka millateriga federaalka oo ku goodiyey Af-ganbi. – Radio Daljir
Juunyo 10, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, June 10- maalintii labaad ayaa magaalada Muqdisho waxaa ka socda bannaanbaxyo baaxad oo lagu diidan yahay is-casilaadda R/wasaaraha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Maxamed \_’Farmaayo\_’.
Bannaanbaxyado oo ka dhacay dhammaan degmooyinka ay dawladdu maamusho ee gobolka Banaadir ayaa waxaa ka qayb-galayey kumanaan dadweyne ah oo iskugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada sida aqoonyahanno, siyaasiyiin, cuqaal-dhameed, culimo-awdiin, haweenka iyo ardada iskuullada Muqdisho.
Isku soo baxyadaan Muqdisho ka socda maalintii labad ayaa ah kuwo lagu diidan yahay loogana soo horjeedo is-casilaadda R/wasaare Farmaayo kaddib markii shir maalmo badan qaatay oo ka dhacay Kampla, laguna dhex-dhexaadinayey madaxda dawladda federaalka ay ka soo baxeen go\_’aamo ay ka mid yihiin in uu meesha banneeyo Farmaayo.
Dadweynaha bannaanbaxa dhigaya ayaa ku dhawaaqaya hal-ku-dhigyo miisaan leh oo ay ku cabirayaan dareenkooda iyo damacooda rabitaan iyagoo dhinaca kale iftiiminaya tallaabooyinkii wax-qabad ee xukuumadda Farmaayo ay ku tallaabsaday illaa iyo intii la magacaabay. taasoo dibad-baxayaashu ay u arkaan in ay muhiimd weyn lahayd.
Dhinac kale saraakiil sar sare oo u hadlay ciidamada millatariga dawladda federaal KMG ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in aysan ka dhaadhacayn is-casilaadda R/wasaare Farmaajo iyagoo ku goodiyey haddii taasi ay dhacdo in ay qaadan doonaan tallaabo ciidan oo micnaheedu yahay af-gambi dawldeed.
Sikastaba ha ahaatee xaalad kacsanaan ah oo aad u xooggan ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho taasoo ka abuuran tahay natiijadii wadahadalladii Yugaandha ee lagu heshiisiinayey m/weynaha iyo guddoomiayaha baarlamaanka, mana cadda halka ay arrimuhu ku biyo shuban doonaan.
Wasiirkii arrimaha gudaha & amniga ee dawlada federaalka oo qarax lagu dilay; Al-shabaab oo sheegtay qaraxaasi.